Kitra – “Orange Pro league”: mety hotohizana amin’ny volana aogositra | NewsMada
Kitra – “Orange Pro league”: mety hotohizana amin’ny volana aogositra
Nampiantso fivoriana ireo kaomision’ny fifaninanana sy ny tomponandraikitra teknika ary ny fitsaboana ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), ny alarobia lasa teo. Fihaonana notanterahina tetsy amin’ny foibe toeran’ny federasiona, etsy Isoraka. Anisan’ireo niatrika ity fivoriana ity koa ny avy ao amin’ny “Orange Pro league”, misahana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara. Tombanan’ny mpikarakara sy ny federasiona hotohizana ny volana aogositra ny fifaninanam-pirenena. Na izany aza, tsy maintsy hisy ny fanovana sasantsasany amin’ireo ambin-dalao sisa tsy tontosa.
Noresahina tamin’izany ihany koa ny ho tohin’ireo fifaninanana hafa toy ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara “Telma coupe de Madagascar”. Mbola hiankina amin’ny fivoaran’ny valanaretina Coronavirus anefa ny zava-drehetra ary koa ny fepetra mifandraika amin’izany, izay hiankina ihany koa amin’ny fandaharam-potoana vaovao, homen’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf), andrasana ny herinandro ho avy io.
Mbola entina hodinihina eo amin’ny fivorian’ny komity mpitantana eo anivon’ny federasiona, hotanterahina ny talata 2 jona ho avy izao, ny dinika natao tamin’ity. Hatreto izany, tsy mbola misy fanapahan-kevitra noraisina nandritra io fivoriana niarahana amin’ny komision’ny fifaninanana io fa tolo-kevitra no naroso.
Heverin’ny rehetra ihany koa fa ho anisan’ny ho voaresaka amin’io talata io ny mahakasika ny fanamiana vaovao hoentin’ny Barea de Madagascar amin’ireo fifaninanana manaraka.